R/W ROOBLE oo Midowga Musharaxiinta u sheegay ARRIN ka go'an inuu fuliyo - Caasimada Online
Home Warar R/W ROOBLE oo Midowga Musharaxiinta u sheegay ARRIN ka go’an inuu fuliyo
R/W ROOBLE oo Midowga Musharaxiinta u sheegay ARRIN ka go’an inuu fuliyo
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa habka fogaan aragga shir kula yeeshay Midowga Musharraxiinta oo ay ka wada hadleen arrimaha dhammeystirka doorashooyinka dalka oo heer gebogebo ah maraya.
Sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiska Rooble, Ra’iisul Wasaaraha ayaa Midowga Musharaxiinta warbixin ka siiyay halka ay marayso howsha doorashada, u diyaargarowga munaasabadda dhaarinta xildhibaannada iyo dadaalladiisa ku aaddan xal u helista arrimaha harsan ee doorashada la xiriira.
“Waxa uu Ra’iisu Wasaaruhu adkeeyay in ay ka go’an tahay in jadwalka dhaarinta xildhibaannada loo dhaqan geliyo sidii ay u soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal ee FEIT, isagoo sheegay in dhaarinta xildhibaannadu dhici doonto 14-ka April oo ah xilligii loo qorsheeyay,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Dhanka kale, Midowga Musharraxiinta ayaa Ra’iisul Wasaare Rooble u ballan qaaday inay garab ku siinayaan dadaallada lagu dhameystirayo doorashooyinka.
Midowga Musharaxiinta ayaa sheegay inuusan jirin xal aan ahayn in jadwalka doorashadu u dhaqan galo sidii guddigu doorashadu u soo saaray, 14-ka bishana la dhaariyo xubnaha cusub ee Baarlamaanka 11aad ee dalka, iyadoo lagu dhinac wadayo xal u helista arrimaha taagan.
Midowga Musharaxinta ayaa sidoo kale ku celiyay taageeradooda go’aankii XFS ay dalka kaga ceyrisay ergaygii Midowga Afrika Francisco Madiera oo faraha la galay arrimo ka baxsan diblomaasiyadda iyo howlihii uu u xilsaarnaa.